Infinix wuxuu ku dhawaaqay Hot 9 iyo Hot 9 Pro: Laba heer dhexdhexaad ah oo leh Helio P22 iyo batari weyn | Androidsis
Infinix ayaa ku dhawaaqday laba telefoon oo cusub ka dib markii ay soo bandhigeen taleefannada Note 7 iyo Note 7 Pro bishii Abriil. Soo-saaraha ayaa soo bandhigaya laba bartamihii dhexe oo ay ku jiraan guddi ballaadhan iyo astaamo bixin doona waxqabadka wanaagsan ee boosteejooyinka markay tagayaan Hindiya ilaa laga bilaabo Juun 5.
Infinix Hot 9 iyo Infinix Hot 9 Pro Waxay ku dhisan yihiin aasaas wanaagsan, naqshadayntu aad ayay taxaddar u lahayd waxayna muujinayaan midabkooda midabada leh ee buluugga iyo buluugga ah. Shirkadda fadhigeedu yahay Hong Kong ayaa markii ugu horreysay ka bilaabi doonta suuqa Hindiya kadibna dhulal kale.
1 Sidoo kale Hot 9 iyo Hot 9 Pro cusub
Sidoo kale Hot 9 iyo Hot 9 Pro cusub
El Infinix kulul 9 isaga oo kale Infinix Hot 9 Pro waxay leeyihiin shaashad 6,6-inji ah oo leh HD + xal, 20: 9 saamiga dhinaca iyo god laga feeray geeska bidix ee kore ee kamaradda iswada ee 8MP. Horeba gadaal waxay u dhexgaleysaa qalabka wax lagu xiro sida akhriska faraha.
Labaduba waxay sidoo kale ku daraan isla processor-ka, Helio P22 oo ka socda MediaTek, 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah iyadoo suurtagal ay tahay in lagu ballaariyo MicroSD. Batariga waa 5.000 mAh oo xamuulkiisu yahay 10W, softiweerkuna waa Android 10 oo leh lakabka caadiga ah ee loo yaqaan 'XOS 6.0' marka lagu daro dhowr barnaamijyo shirkadeed.
Farqiga u dhexeeya taleefannadan casriga ahi waxay ku jiraan dareemayaasha dambe ee dambe, Hot 9 wuxuu leeyahay lens 13 megapixel ah, halka Hot 9 Pro uu leeyahay 48 megapixel sensor. Horeba saddexda lasocda waa isku mid: 2 MP macro sensor, 2 mm sensor sensor iyo dareemayaal iftiin hooseeya oo heegan ah.
El Infinix Hot 9 wuxuu imaanayaa INR8,499 (ilaa 100 euro in la beddelo) iyo Infinix Hot 9 Pro Waxay ku soo baxdaa INR9,499 (112 euro). Labaduba waxay ku yimaadeen Juun 5 iyaga oo wata laba nooc oo midabbo kala duwan leh, buluug iyo guduud leh sameecado dhegaha lagu dhejiyay sanduuqa, xeedho iyo ilaalin loogu talagalay guddiga IPS.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Infinix wuxuu ku dhawaaqay Hot 9 iyo Hot 9 Pro: Laba heer dhexdhexaad ah oo leh Helio P22 iyo batari weyn
Energy Sistem Sport 6 falanqaynta dhagaha